लक्षण बिहीन कोरोना संक्रमितलाई १४ दिनपछि डिस्चार्ज गर्न निर्देशन – PathivaraOnline
Home > समाचार > लक्षण बिहीन कोरोना संक्रमितलाई १४ दिनपछि डिस्चार्ज गर्न निर्देशन
admin August 26, 2020 समाचार, स्वास्थ्य	0
काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लक्षण नभएका कोरोना संक्रमतिलाई १४ दिनपछि कोरोना परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले सबै सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा कोरोना विशेष अस्पतालहरुलाई परिपत्र गरेर कोरोनाको लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई १४ दिनपछि डिस्चार्ज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
लक्षण बिहीन कोरोना संक्रमितको संक्रमण पुष्टि भएको १० दिन पछि पुनः परीक्षण गरी डिस्चार्ज गर्न आग्रह गरेको छ । कोरोना संक्रमण भएको १० दिनपछि कोरोना परीक्षण गरि रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा डिस्चार्ज गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले बताए ।
डा गौतमले १० दिनपछि भएको परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिएमा १४ दिन पछि पुनः परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्न समेत सबै कोरोना विशेष अस्पताललाई निर्देशन दिएका छन् । उनले १४ दिन भन्दा बढी समय अस्पतालमा राखेमा त्यसको खर्च सरकारले नव्यहोर्ने बताए ।
आज २४ घण्टामै यति धेरैले जिते कोरोना
अनसनरत डाक्टर केसीको अवस्था फेरि नाजुक, अस्पतालतिर लगियो!
‘संसदभित्र सल ओढेर जाँदा राम्रो देखिएन रे !’
कोरोनाकाे कहरसँगै आजबाट खुल्यो अन्तराष्ट्रिय उडान, तर कहाँ र कति समयमा? जान्नुहाेस्